Guide lagama maarmaan ah in Maaraynta Xidhiidhada Android
Xiriirada noqdaan xuduntii ee casriga ah wax loo eegayn nidaamka qalliinka (OS) sida Android, macruufka, Windows iwm sida aad u baahan tahay si aad ula xidhiidho asxaabta, asxaabta, iyo dad kale oo ganacsi si joogto ah adiga oo isticmaalaya mobile Xararad. Sidaas awgeed waxa si fudud u fahmi karo in sida ay muhiim ay tahay in loo maareeyo xiriirrada on Qalabka telefoonada gacanta. In this article, waxaan ka wada hadli doonaan guud oo ku saabsan sida loo maareeyo xiriirrada Android.
Maareynta xiriirada Android la xiriira tafatirka, qarinaya ama soo horjeeda, xanibeen, degida, dhoofinta ee xiriirada. Dhammaan noocyada kala duwan ee, kuwaas oo ka mid ah maamulka xiriirada ee Android lagu hadda ka wada hadleen.
1. Edit Android Xiriir
2. Qari oo unhide xiriirada on Android
3. Block Xiriirada on Android
4. Import iyo dhoofinta xiriirada Android
Edit Android Xiriir
Tafatirka xiriirada android ka mid noqon kara hawsha ku daray, la tirtiro, kooxaynta xiriiro. Ka dib markii lahaanshaha qalab Android aad la jecel yahay, waa in aad u tagto badbaadiyo, tirtirka iyo sidoo kale udag ee xiriirada kala duwan waxaa ka mid ah. Lacag xiriir ah oo ku saabsan qalab Android aanay dhaqdhaqaaq adag oo aad u samayn karaa iyada oo talaabooyinka soo socda: -
Tag Garaac pad> Nooca Number> Hit Button dar> Magaca Contact> Tubada badhanka Save the = aad samaysay.
Haddii aad u baahan tahay in lagu daro tirada ah ee hadda jira uu soo wacay ama la helay telefoonka, ka dibna aad leedahay doonaa in ay sameeyaan tallaabooyinka soo socda: -
Tag suuqa kala Helay ama la wacay ka menu Log ah> Press tirada> Isticmaal Button dar> Hit button Save the = sameeyo.
Xiriirada uruuriyay waxay la samayn karaa inta lagu guda jiro badbaadinayo muddada doorataa koox u gaar ah. Dhinaca kale, tirka xiriir ah oo ka Android casriga ah ama kiniin waa at farta. Waxaa laga yaabaa inaad doonto in ay dul istaagin fartaada on xiriir ah in aad rabto in aad tirtirto. Markaas,
Saxaafadeed dheer oo ku saabsan xidhiidhka u> Dooro iyo Tubada ku tirtirto ka mid ah liiska mid ah fursadaha> doorato Haa = sameeyo.
Oo sidaas waa inaad u aragto sida ay u fududahay in xaalkaa xiriirada on Android.
Qari iyo xiriirada unhide on Android
Waxaad la yaabi laga yaabaa oo ku saabsan sida loo qariyo ama xiriirada unhide on Android! Ma tallaabooyinka loo qariyo ama unhide xiriirada aad looga baahan yahay in la qarin ama unhidden soo socda.
Tallaabada 1. Marka hore, la abuuro koox ka soo xiriiro: furaa "Contact" codsiga> Dooro tab Kooxda> Hit badhanka Samee.
Tallaabada 2. magac koox aad abuuray sii. Ka dib markii in, ku dar xiriirada ee kooxda.
Tallaabada 3. Hadda mar kale soo booqdo si ay "Contact" codsiga halkaas oo aad ka arki doonaa dhammaan xiriirrada badbaadiyey. Tubada badhanka menu oo uu aado for "Xiriirada inay muujiyaan".
Tallaabada 4. Waxaad arki doonaa "Custom List" oo waa inay ku yaallaan meesha ugu hooseysa. By doorashada liiska Custom menu, waxaad yeelan doontaa qolka u qarinaya xiriiro sida aad u baahan tahay.
Tallaabada 5. Hadda waxaad karaa sanduuqyada group oo aad rabto in aad aragto. Ha u fiirso koox aad u abuuray ka hor. Ka dib markii aan sidaa yeelno, xiriirada oo dhan ayaa la soo bandhigi doonaa marka laga reebo xiriir kooxda sumad lahayn ee.
Iyada oo loo marayo hab fudud, aad qarin karaan xiriirada on Android.
Si unhide xiriirrada qarsoon hoos koox qarsoon, kaliya tagaan "Custom List" mar kale u fiirso kooxda hore sumad lahayn, markaas waa inaad unhide yaabaa xiriirada hoos kooxda.
Block Xiriirada on Android
Marna ha ka welwelin wax badan oo ku saabsan sida loo fekerayo xannibi xiriirada on Android sida aad u raaci kartaa xoogaa tallaabooyin ah si loo joojiyo lambar kasta oo gaar ah. Dooro Abuur ka dibna geli xiriir ama nambarka in aad rabto in aad xannibi. Intaa ka dib, ka dhacay button sameeyey si loo joojiyo xiriirka ee ku yaalla Android si fudud.
Import iyo dhoofinta xiriirada Android
Si aad xaalkaa xiriirada on Android, waxaad u baahan doontaa inaad soo dhoofsadaan iyo sidoo kale xiriir dhoofinta hadda kasta oo markaas. Wixii loo dhoofiyo iyo dhoofinta xiriirada on Android, waxaan ka hadli doonaa app weyn loo yaqaan Wondershare MobileGo. Dhalashada ee feature dareen leh oo si sahlan loo isticmaali MobileGo ee, ma yeelan doonaan in aad mar dambe ma ay sugin soo degida xiriirada ka aaladaha kale ee aad mid ka mid sidoo kale dhoofinta xiriirada ka Android dadka kale. Just raac tallaabooyinka fudud si aad u hesho dejinta ama dhoofinta xiriirada muuqan sameeyo.
Tallaabada 1. Kadib markii ay ku app Wondershare MobileGo aad kombuutarka, waxaad tagtaa khaanadda tagay suuqa kala app. Waxaad arki doontaa wax menu "Xiriirada" ee liiska column ee. By siyoodba ku menu Xiriirada, waxaad booqan kartaa bogga maamulka xiriirada.
Tallaabada 2. In uu furmo suuqa maareynta maamulka xiriir ee, guji "Import" button ku taal geeska bidixda ah ee kore. Hadda waxaad haysataan 5 ilo kala duwan u soo degida aad xiriirka la leedahay. Ilo waa vCard, Outlook Express, Windows Live Mail, Windows Cinwaanka Kitaabka iyo Muuqaalka 2003/2007/2010/2013.
Tallaabada 3. Hadda waxaad yeelan doontaa in ay ka soo xusho oo il aad u dajiyaan doonaa xiriir. Xiriiro lagu kaydin karaa in aad kaarka SIM, telefoonka, mail Google, Facebook, LinkedIn, Twitter ama noocyo kale oo badan oo ka mid ah xisaab. Haddii aad xiriirka la leedahay waxaa la badbaadiyey on Gmail, Facebook, Twitter ama xisaab kale, ka dibna aad u soo dhoofsadaan kara xiriirada, isagoo saxiixay in aad xisaabta iyo soo dejinta xiriiro loo baahan yahay ka jiraan.
Tallaabada 1. Like ka hor, waxaad tagtaa khaanadda tagay suuqa kala app ee. Laga soo bilaabo safka, jaraa'id ku "Xiriirada" menu ah kaas oo lagu soo jihayn doonaa in suuqa kala ah kooxda cusub halkaas oo aad ka arki doonaa "Dhoofinta" button ku sugnaa ka dib markii ay "dejinta" button.
Tallaabada 2. Press on "Dhoofinta" button> ka soo liiska xiriirada badbaadiyey, calaamadee loo baahan yahay ama dhammaan xiriirrada aad rabto in aad u dhoofiyaan qalab kale.
Tallaabada 3. Wixii dhoofinta xiriirada Android, waxaad yeelan doontaa 6 meelo kala duwan oo ah inay sidaa sameeyaan. Tusaha waa vCard, Outlook Express, Windows Live Mail, Windows Cinwaanka Book, Muuqaalka iyo 2003/2007/2010/2013 file CSV.
Tallaabada 4. dooro hagaha aad jeclaan lahayd in ay u dhoofiyaan xiriir ah. Ka dib markii xulashada qof ee tusaha, waxa ku bilaaban doono dhoofinta xiriirada tusmada in. By sidan, aad dhoofin karo xiriirada Android.
Waxaad u timaadeen inaad ogaan tallaabooyinka u fududahay xiriir tafatirka siyaabo kala duwan oo ku saabsan qalabka Android aad. In kastoo waa ay fududahay in la sameeyo geeddi-socodka nidaamka hawlgalka hooyo ee Android, app lagu kalsoonaan karo sida Wondershare MobileGo sidaas samayn kara habka aad uga fiican ka PC. Geedi socodka tafatirka la app waa mid aad blazingly degdeg ah. , Sidaas si xaalkaa xiriirada on Android, ma heli doontid waqti adag qabanayaan in haddii aad isticmaasho app tafatir oo aan.
> Resource > Android > Guide Muhiimka ah inay Maaraynta Xidhiidhada Android